apreyizali umbono izangoma-yokomoya Fukuoka Prefecture
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ apreyizali umbono izangoma-yokomoya Fukuoka Prefecture
Izangoma of Fukuoka Prefecture, uya kwazisa uvavanyo umbono ngokomoya inkonzo kunokwenzeka.
https://uranai-fukuoka.com/ Noda ngabameli
La Paul Seiun Appraisal, ugogo koomama Ndakhulela kwindawo pneumatically nxi Umvandlakanyi. Nangona yena wayengenamdla ithamsanqa amabali, njalo njalo, nazo watyelela amatyala 100 abantu ezweni oosiyazi kwe kwi Emva kokugula, unalo umsebenzi ngoko ngokwakhe neqembu yakhe Umvandlakanyi.
Noda-apreyizali mbono ngokomoya ndlela kukuba abantu unique usebenzisa Fuchi, kukuba trust ukusuka ikakhulu abaphathi njl zamafu. Abaqalayo ukuya izangoma original koko abafazi ufuna uthethwano, ezifana nothando nomtshato baninzi, kodwa irekhodi lweengoma iye wasabela kakuhle yokubonisana of abaphathi loo sisityebi cishe.
of lo dade ezingoovimba "ngokutsha engqondweni nasemzimbeni Este, Orgon intyatyambo" ummeli, Tamaki uMnu unopopi ezahlukeneyo ubuchule ezifana ngempembelelo, umbono ngokomoya, ukufunda wesundu, Ichin-umthandazo, kukuba amava atyebileyo yokucebisana ezikhathazayo bakho abantwana nabo. Ekubeni lwentsebenzo jikelele ixabiso
yimizuzu 60 9000 yen, mhlawumbi ngokubanzi uluhlu kwinqanaba emarikeni.
buvuleleke kwi Imaizumi Fukuoka chuo-ku, Fukuoka, Nishitetsu Station Tenjin, Subway Airport Line Akasaka Station, uhambo olufutshane ukusuka sikaloliwe Nanakuma umgca Yakuin Odori-Watanabedori.
Irie Ryumoto elibalaseleyo kwi iphefumlelwe ndisemncinane, wokwakha umsebenzi phantsi uMnu Motohide Kojima ngexesha lonyaka-21 ubudala, wavunyelwa ukuba ukuvula i TsuKamiRyu Sachishirube e Fukuoka City Kurume City ngo-2010.
yovavanyo oluqhutywa yonke imboniselo kokomoya, ngokubonisana okuqulathwe msebenzi, ikhaya, umtshato, abantwana, isibini, ndlu, izibonelelo zoluntu jikelele, uMlilo & njengokugula, kabanzi nantoni thethwano kunokwenzeka. Imali Appraisal i yemizuzu engama-30 5000 yen. Ukuba kukho imfuneko kwaye ithemba
umbono ngokomoya apreyizali, Nonhlanhla kunye Kiyoshirei, sixhasa Ngaba, ezifana umthandazo, umthandazo (kwentlawulo engaphezulu).
Indawo Fukuoka Prefecture, Kurume City, uyafumaneka ngenyawo evela Nishitetsu Kurume Station.
◆ Fukuoka oosiyazi Ukufuna | oosiyazi bokwenene injongo yokwenene
Murakumo Village yaye eli nxuwa, Fukuoka kubonakala ukuba odumileyo phakathi kwabantu abanomdla apreyizali embonweni izangoma ngokomoya. Kwisayithi, kukho inkcazelo isiphumo ukuba blog izangoma ukuba kokubonisana-apreyizali umbono yokomoya iye iziqwenga e Fukuoka, kodwa ukufumana iinkcukacha ezifana intlawulo yovavanyo lwentsebenzo le.
Mhlawumbi elimfakela ukugaya-apreyizali mbono ngokomoya ngokwenene Internet kuphela nje tweet. ulwazi oluneenkcukacha
kuya kufuneka baqonde ngokukhawuleza ye PostScript. //ryu.uranaido.net/
Murakumo Village yaye eli nxuwa, phakathi kwabantu abanomdla apreyizali embonweni izangoma kunye yokomoya Fukuoka kubonakala ukuba odumileyo. Kwisayithi, kukho inkcazelo isiphumo ukuba blog izangoma ukuba kokubonisana-apreyizali umbono yokomoya iye iziqwenga e Fukuoka, kodwa ukufumana iinkcukacha ezifana intlawulo yovavanyo lwentsebenzo le.
kuya kufuneka baqonde ngokukhawuleza ye PostScript.